ဟဒီးဆ်: ကောင်းမှုဟူသမျှသည် ဆွဒကဟ် အလှူဒါနပင်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ကောင်းမှုဟူသမျှသည် ဆွဒကဟ် အလှူဒါနပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ကောင်းမြတ်သည့် အမလ်ကျင့်ဆောင်မှုများ၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل معروف صدقة».
ဂျာဗိရ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ္လာဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ကောင်းမှုဟူသမျှသည် ဆွဒကဟ် အလှူဒါနပင်ဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဆွဟီးဟ် အဆင့်ရှိသည်။ - ဗုခါရီကျမ်း။
လူသားတို့ ပြုလုပ်သည့် ကောင်းမှုဟူသမျှသည် ဆွဒကဟ်အလှူဒါနပင်ဖြစ်သည်။ ဆွဒကဟ်ဟူသည် လှူဒါန်းသူက မိမိ၏ဥစ္စာပစ္စည်းမှ ပေးကမ်းလှူဒါန်းလိုက်သောအရာကို ခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ဖရ်ဿွ်တာဝန်ဖြစ်သည့် အလှူဒါနနှင့်နဖ်လ် အလှူဒါန အားလုံးပါဝင်သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းအား အကျိူးကုသိုလ်ရရှိရာ၌ ဆွဒကဟ်အလှူဒါန၏ အမိန့်အတိုင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည်။
ဧကန်မုချ ဆွဒကဟ်အလှူဒါနသည် လူသားတို့လှူဒါန်းလိုက်သည့် ဥစ္စာပစ္စည်းကိုသာ ကန့်သတ်ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်။ လူသားတို့ပြုလုပ်လိုက်သောကောင်းမြတ်သည့် လုပ်ရပ်နှင့်အပြောအဆိုတိုင်းသည် ဆွဒကဟ်အလှူဒါနဟူ၍ပင် ရေးမှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟဒီးဆ်တော်ကညွှန်ပြထားသည်။
ဟဒီးဆ်တော်၌ ကောင်းမှုကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြုလုပ်ရန်နှင့် အခြားသူများအတွက် အကျိုးရှိသောအရာတိုင်းကို ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အသင်တို့၏နေအိမ်များကို ကဗရ်သင်္ချိုင်းများအဖြစ် မပြုလုပ်ကြနှင့်၊ ငါကိုယ် တော်၏ကဗရ်ကိုလည်း အီးဒ်မပြုလုပ်ကြနှင့် ငါကိုယ်တော်အပေါ်သို့ ဆွလာသ်မေတ္တာပို့သကြလေကုန်၊ ဧကန်မုချအသင်တို့၏ ဆွလာသ်မေတ္တာပို့သမှုသည် အသင်တို့ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ဖြစ်စေ ငါကိုယ်တော်ထံ ရောက်ရှိလေသည်။
မည်သူမဆို ရိုဇီရိက္ခာ ကျယ်ဝန်းစွာ ချီးမြှင့်ခံရရန်နှင့် ၎င်း၏သက်တမ်း ရှည်လျားမှုရရန် နှစ်သက်လိုလားလျှင် ဆွေမျိုးဆက်ပါ။